कस्तो होला मन्त्री झाँक्रीको कार्यकाल ? – Nepal Views
कस्तो होला मन्त्री झाँक्रीको कार्यकाल ?
ओलीविरुद्धको तीखो आलोचना गरेर चर्चामा आएकी उनलाई अब आफ्नै आरोप आफैतिर फर्किनबाट जोगाउन चुनौती छ। अर्थात्, सत्ता बाहिर बसेर शासकमाथि औँला तेर्स्याउन सजिलो छ। तर, सत्तामा गएर काम गर्न गाह्रो भन्ने भनाइलाई चिर्नु झाँक्रीको चुनौती हो।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका तर्फबाट रामकुमारी झाँक्री शहरी विकासमन्त्री बनेकी छिन्। समकालीन नेताहरूमा युवा नेत्री झाँक्री स्पष्ट बोल्ने र स्वच्छ छवि बनाएकी नेताको सूचीमा पर्छिन्। आफ्ना विचार स्पष्टसँग राख्ने, खरो बोल्न र नडराउने नेत्रीको रूपमा परिचित झाँक्रीलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी आइपुगेको छ।
पदभार ग्रहणपछि मन्त्री झाँक्रीले सम्पूर्ण क्षमता लगाएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेकी छिन्। काम नभएर बजेट फिर्ता पठाउने अवस्था नआउने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाइन्। झाँक्रीले मन्त्रालयले काम गर्न नसकेर बजेट फ्रिज गरेको सुन्नु नपरोस् भन्दै कर्मचारीहरूलाई निर्देशन समेत दिएकी छिन्।
झाँक्रीले पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारको गतिविधिविरुद्ध भाषणमा कडा आक्रोश पोखेकी थिइन्। नेकपामै रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विरोधमा भृकुटीमण्डपमा भएका विरोध कार्यक्रममा झाँक्रीले मुखमा लगाएको टेप खोल्दै ‘बोल्न पाइन्छ ’ भनेर गरेको भाषण चर्चित छ।
ओली सरकारले जनताको पक्षमा काम नगरी माफियाको पक्षमा रहेको आरोप समेत उनको थियो। ओलीविरुद्धको तीखो आलोचना गरेर चर्चामा आएकी उनलाई अब आफ्नै आरोप आफैतिर फर्किनबाट जोगाउन चुनौती छ। अर्थात् सत्ता बाहिर बसेर शासकमाथि औँला तेर्स्याउन सजिलो छ। तर, सत्तामा गएर काम गर्न गाह्रो भन्ने नेपाली राजनीतिमा चलीआएको भनाइलाई चिर्नु झाँक्रीको चुनौती हो।
आशलाग्दी युवा नेत्री आदि उपमा पाएकी झाँक्री मन्त्री बनेपछि सामाजिक सञ्जालमा अनेक विचारहरू प्रकट भइरहेका छन्। कतिपयले भने मन्त्री पदले झाँक्रीको लोकप्रिय छवि धमिल्याउने भन्दै पूर्वानुमान गरेका छन्। कतिपयले चाहिँ जिम्मेवारी लिएर काम देखाउन र बाहिर विरोध गर्दै हिँड्न फरक हुन्छ भन्ने सिकाउन बनाइएको लख काटेका छन्।
झाँक्री सांसद बनेको नै यो पहिलो पटक हो। संसदीय यात्रामै नयाँ अनुभव लिइरहेकी झाँक्रीलाई मन्त्री हुने पनि सौभाग्य मिलेको हो। अब भने उनलाई गठबन्धनको सरकारमा काम गरेर देखाउनुपर्ने चुनौतीको थुप्रो छ। हुन त यसअघिका शहरी विकास मन्त्रीले पनि स्मरण योग्य काम गर्न सकेका थिएनन्। यसअघिका सबैले औसत क्षमता देखाएकैले कसैको पनि नाम चर्चामा सुनिँदैन। प्रष्टवक्ता, विरोधीप्रति आक्रामक स्वभाव र मास लिड गर्न सक्ने झाँक्रीको कार्यकाल भने कस्तो रहँदा आउँदा दिनमा देखिने नै छ।
२०७८ असोज २२ गते २१:५३